RASMI: Barcelona Oo Shaacisay In Mid Kamida Xiddigaha Ugu Muhiimsan Kooxdeedu Uu Seegi Doono Final-ka Copa Del Rey Ee Valencia. - Gool24.Net
Kooxda Barcelona ayaa si rasmi ah u shaacisay maqnaanshaha goolhayaha kooxdeeda ee Marc Andre Ter Stegen ee kulanka Final-ka Copa Del Rey ee ay la yeelan doonaan kooxda Valencia toddobaadkan.
Kooxda ayaa warbixin caafimaad oo rasmi ah kasoo saartay xaalada Ter Stegen shalay oo Arbaca ahayd waxaana ay iclaamisay in uu wali qabo dhibaato jilibka ah isla markaana uu sii wadan doono daawaynta jilibkiisa.
Dhibaatadan soo gaadhay safka kooxda ayaa la filayaa inaysan wax isbedel ah ku samayn doonin shax ciyaareedka uu kulankaas kusoo shirtagi lahaa tababare Ernesto Valverde.
Valverde ayaa la filayaa inuu kusoo bilaabi doono goolhayaha ree Holland ee Jasper Cillessen kaas oo marka horeba joogto ka ah shaxda Barca ee Copa Del Rey walow uu seegay kulamadii afar dhammaadka tartanka ee Real Madrid.
Cillessen oo qudhiisu marka hore dhaawac qabay ayaa la filayaa inuu sidoo kale kusoo laabto kooxda kulankaas Final-ka iyadoo ay macquul tahay inuu noqdo kulankiisii ugu dambeeyay ee uu ku ciyaaro maaliyada Barca.
Goolhayaha dookha koowaad ee xulka Holland ayaa doonaya inuu iskaga tago Camp Nou oo uu u wareego koox kale oo uu ka heli karo daqiiqado iyo fursad ka badan mida uu Barcelona ku haysto.
Dhinaca kale Luis Suarez oo qaliin maray dhawaan ayaa sidoo kale maqnaanaya, Ousmane Dembele ayay u badan tahay inuu isna seegi doono kulanka adag ee Sabtida.
Ugu dambayn, Xiddigaha ree Brazil ee Philippe Coutinho iyo Arthur Melo ayaa ayaa iyagu kusoo laabtay tababarka kooxda balse waxaan la hubin haddii tababare Ernesto uu usoo xulan doono kulan Final ah iyaga oo haatan uun soo kabtay.